Vokatra hiragasy :: Namoaka ny kapila vaovao ry Ramilison Besigara Zanany • AoRaha
Takon’ny resa-pifidianana ka somary mangingina ny fitetezam-paritra ataon’ny tarika mpanao hiragasy.
Na izany aza, misy ny vokatra azo atolotra. Fantatra fa namoaka ny kapila « Ampitovio ny tandem dia tsy misy ny blem » ry Ramilison Besigara Zanany, avy any Fenoarivo. Tamin’ny alalan’ny fitaovana raitra sy arifomba no nanatontosana ny rakitsary, araka ny fana­zavan-dRandriamampionona Joseph Martin na i Dadafara, mpitantana ny LT Production nisahana ny famokarana an’ity vokatra ity.
“Nahatratra roa ambin’ny folo ny fitaovam-pandraisana sary nampiasaina…Nifana­raka tamin’izany ihany koa ny kalitaon’ny fandraisam-peo”, hoy izy.
Tanjona ny hisarihana ny olona rehetra hitia sy hankamamy ny hiragasy. “Teny an-kianja mihitsy no nandraisana ny feo sy ny sary fa tsy tany anaty efitrano mba hahazoana mianoka tsara ny hakanton’ny hiragasy sy ny fitaizana azo avy aminy”, araka ny namba­rany hatrany.
Fanamby ataon’i Dadafara LT Production ny hitondra fanatsarana eo amin’ny sehatry ny hira gasy. “Fafàna tante­raka ao an-tsain’ ny olona ilay fihevitra manao hoe tsy mahavita zavatra tsara loatra ny tontolon’ny hiragasy. Hamafisinay tanteraka amin’ity rakitsary misy ny sanganasan’ny tarika Ramilison Besigara ity fa manara-penitra sady sahy miatrika ireo heverina fa vokatra manana kalitao tsara ny hiragasy”, hoy i Dadafara manazava.
Ho fiarovana amin’ny piraty sy ny mpanao hosoka ary ny dika mitovy, dia ny “Sera­sera Hiragasy” eny Isotry, ihany no mamoaka sy manaparitaka ny vokatra.
Dome RTA Ankorondrano :: Hotsiahivina amina seho tokana ny hiran’ny taona 60, 70, 80 ary ny 90